13 libri di autori maltesi Hai bisogno di leggere - Page 10 of 83 - https://themummichogblog.com
আশ্চর্যজনক উপন্যাস এই টকটকে স্ট্যাক জয় করতে চান? হেড আমাদের ফেসবুক পোস্টে উপর এবং আমাদের বলুন যা মল্টিয় বই আপনার প্রিয়, এবং আপনি মার্লিন পাবলিশার্স থেকে Sette Giugno জন্য এই সুন্দর Sette বই জিততে পারে!
নিবন্ধ শিরোনাম “ফীল-Mergħat Tal-Impossibbli” সংশোধন করার আপডেট করা হয়েছে।
မောလ်အာဏာပိုင်များမှ 13 စာအုပ်များကိုသင်ရန်ကိုဖတ်ဒီနွေရာသီလိုအပ်
နွေရာသီရုံထောင့်ပတ်လည်မှာဖြစ်ပြီးကျနော်တို့နောက်ဆုံးတော့ရှည်ပျစ်ရည်နှင့်သမုဒ္ဒရာနှင့်အကောင်းတစ်ဦးစာအုပ်အားဖြင့် lounging အချိန်ဖြုန်းနိုင်ပါ။ သင်အနည်းငယ်ပိုမိုနီးကပ်စွာအိမ်ပြန်ဖို့ Mordor ထက်တစ်ခုခုရှာနေလျှင်, သင်မောလ်စာရေးဆရာများအားဖြင့်ဤသူ 13 အံ့သြဖွယ်ခေါင်းစဉ်ထုတ်စစ်ဆေးဘာလဲဆိုတာပေလိမ့်မည်။
Merlin ထုတ်ဝေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုကြည့်ဖို့ပေါ်မှာဖတ်တဦးတည်းကံကောင်းဆုရှင်မှပယ်ရှားပေးရသောဤစာအုပ်များ7လှပသော stack ရှိသည်!
Harley Quinn စာဖတ်ခြင်း
1. Dak li ဌ-lejl iħalliktgħid, Pierre ၏ဂျေ Mejlak
အစဉ်အဆက်စာပေများအတွက်အီးယူ Prize ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါပြီဖို့နှစ်ခုသာမောလ်စာအုပ်တွေတစ်ဦးအဖြစ်, ဒီတစ်ဦးမဖြစ်မနေဖတ်ခေတ်ပြိုင်စိတ်ကူးယဉ်၏မိတ်ဆွေတို့ကိုအဘို့ဖြစ်၏။
ဘရပ်ဆဲလ်, Ġużè Stagno အတွက်ဘရပ်ဆဲလ်ကျန်ရှိနေအတွက်ဘာဖွစျသှား 2.
သျောလညျးခေါင်းစဉ်, ဒီမောလ်များတွင်ဂန္ Stagno, ဥရောပသမဂ္ဂ၏မြို့တော်အတွင်းမိမိကိုယျကိုတှေ့ quintessential မောလ်ကျွန်းပေါ်မှာ Hilary နှင့်အမြင်ယူသည်။ ဒါဟာအစ 5000 စကားလုံးများနှင့်ရေတွက်မှာဖြစ်နိုင်သည်မောလ်စာပေထဲမှာအရှည်ဆုံးလိင်မြင်ကွင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတာပါရှိပါတယ်။
3. Kulħaddħalla isem warajh, Clare Azzopardi
သူမ၏မျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုအကောင်းဆုံးစာရေးဆရာ, ဒီသူမ၏အကောင်းဆုံးမှာ Azzopardi ဖြစ်ပါတယ်။ Kulħaddħalla isem warajh ကိုးမမေ့နိုင်သောအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ရဲ့ပုံပြင်အောက်ပါအတိုင်း။
4. Sqaq ဌ-Infern ရှိမုန် Bartolo နှင့် Loranne Vella
Sqaq ဌ-Infern နည်းပညာပိုင်းတစ်သားသမီးရဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျယ်ပြန့်လူကြီးများနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်မော်လ်တာရဲ့ပထမဦးဆုံး crossover စာအုပ်ဖတ်, ဤစာအုပ်နှင့်၎င်း၏နှစ်ခုဇာတ်လမ်းများလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အားလုံးဒေသခံအရောင်းမှတ်တမ်းများ shattering, မောလ်စာပေသို့စိတ်ကူးယဉ်ယူဆောင်ခဲ့သည်။
5. Il-Ħajja Sigrieta tan-နာကိုĠenoveffa, Trevor Zahra
မော်လ်တာရဲ့ raunchiest နှင့်အကျော်ကြားဆုံးနာကို – ဤလူကြီးများမှသာလျှင်ဇာတ်လမ်းတစ်ဦးမဖြစ်မနေ-ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကတစ်ဦးတစ်မိနစ်ရယ်။
6. ္တရ-Mergħat Tal-Impossibbli ဂျွန် Bonello
စတိဗ် Ebejer သင့်ရဲ့ပျှမ်းမျှအချိန်ခရီးသွားမဟုတ်ပါဘူး။ မိမိအသူသညျမိမိပစ္စုပ္ပန်ထဲကစို့နှင့်မည်သည့်အခိုက်မှာအခြားအချိန်နှင့်နေရာသို့လှဲချရှာတှေ့နိုငျဆိုလိုတာကတစ်ဦးမထိန်းချုပ်တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ စီအချိန်သူကမ္ဘာကြီးကိုကယ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်က၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲ Jien Wieħed Minnhom ပေါ်တွင်သင်၏လက်၌ရရှိရန်စောင့်ဆိုင်းနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဆုတ်ထားတာ
ကီဗင် Cacciattolo ?, မာကု Vella Lil 7. X’Seta ” Ġralu
လတ်ဆတ်သစ်ကိုအရေးအသားများအတွက် Abbozz ယှဉ်ပြိုင်မှု၏ပထမဦးဆုံးထုတ်ဝေ၏ဆုရှင်ပါ။ အဆိုပါရှစ်ဆယ်မှာသူတို့ရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနေထိုင်ခဲ့သောသူအပေါင်းတို့အဘို့စုံလင်။
8. သည်-Sriep Reġgħu Saru Velenużiအဲလက်စ် Vella ဂေရ
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်အခါဤစာအုပ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ, တော်တော်ဂရပ်ဖစ်လိင်မြင်ကွင်းများနှင့်အတူစာရေးသူရဲ့ကျော်ကြားမှုအဘို့, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဝန်ကြီးချုပ် Dom Mintoff လုပ်ကြံရန်တစ်အယောင်ဆောင်ပြီးကြံစည်မှုန်းကျင်ဆုံလည်က၎င်း၏ကြံစည်မှုအဘို့, ကြီးမားတဲ့အုန်းအုန်းသဲသဲဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
9. Qed Nistenniek Nieżla max ကို-Xita, Pierre ၏ဂျေ Mejlak
ယင်း၏ဆယ်စုနှစ်၏ defining စာအုပ် – Mejlak ကဒီမှာမောလ်စာပေအစွန်း, နာမည်ကျော်နှင့်ပျော်စရာဖြတ်တောက်နိုင်ပါသည်ဘယ်လိုပြပွဲ။
10. Gramma, လီယန်း Ellul
အဆိုပါ Canon မှမကြာသေးမီကများအပြင်, Gramma အမြန်ဆုံးအရောင်းရဆုံးဝတ္ထုခေါင်းစဉ်ကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဖြစ်လာခဲ့သည် – က anorexia နှင့်အတူနေထိုင်နေတဲ့မြင့်မား-တရားစွဲဆိုအနက်ဖြစ်ပါတယ်။ Gramma တစ်လီယန်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံများအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခြင်းနှင့်မမှန်စားသုံးခြင်းကနေသူတို့အားဆင်းရဲဒုက္ခနာကျင်မှု၏အဖြစ်မှန်ထုတ်ဆောင်ခဲ့သည်။
11. Lucy ကိုအောင်မင်း ?, Lara Calleja
ဤသည်ပွဲဦးထွက်ဝတ္ထုစာအုပ်-လက်မှတ်ထိုးညဉ့်တွင်စံချိန်တင်အရောင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါစိတ်ကူးယဉ်ပုံပြင်စာအုပ်အတွက်အဓိကဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်သူကိုနုပျိုမြို့ပြစာဖတ်သူများနဲ့စိတျဝငျစားသပိတ်မှောက်သည်။ Lucy ကို “မသိမကျွမ်းသော” မိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်တစ်ဦးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆန္ဒပြမှာနဖူးစည်းစာတန်းကိုင်ဖို့ဘယ်လိုမျှမစိတ်ကူးခဲ့; သူမတစ်ဦးအချည်းစည်းလူကိုမြင်ကြတစ်ခါမျှ; သူမကူကယ်ရာမဲ့ရက်စွဲများတစ်စီးရီးခဲ့ပြီးတော့သူမကဂျော့ခ်ျနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
မင်းသား၏အမည်, Liam Gauci ခုနှစ်တွင် 12.
အဆိုပါအမိန့်၏နှစ်တာကာလအတွင်းမောလ် corsairs – – မင်းသား၏နာမ၌အတူ, Liam Gauci မော်လ်တာရဲ့အတက်ကြွဆုံးငယ်ရွယ်သမိုင်းပညာရှင်အဖြစ်သူ၏အခန်းကဏ္ဍကိုခိုင်မာ, နှင့်ဘာသာရပ်ကိစ္စကသူ့ချဉ်းကပ်၏ကူးစက်စိတ်အားထက်သန်တိုက်စစ်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်တစ်ဦးအမြန်ခေါဝင်ငွေကယ့်ကိုဖွင့်ထုတ်ဖြစ်ဘူးသောသူဇာတ်ကောင်တစ်ရောင်စုံ, နာမည်ကျော်ခင်းကျင်းခြင်းဖြင့် run ခဲ့ – မပို, မနည်း – ထို Notary မော်ကွန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် corsairing, Gauci လက်ဆောင်ထံမှသုတေသနများကကျားကန်ပေးခဲ့ကြသည်။
13. နှစ်ဦး, Teodor Reljić
အဲလစ်ဇဘက်, သူမ၏မိသားစုနှင့်အတူမော်လ်တာအတွက်သူမ၏နှစ်စဉ်နွေရာသီအားလပ်ရက်အပေါ်တစ်ဦးမေ့မြောနေတဲ့နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုနှင့်စာရွက်များကြုံတွေ့နေကြရသည်။ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအပေါ်ပြန်လည်နာလန်ထူမရှိနိမိတ်လက္ခဏာနှင့်အတူ, သူမ၏သားငယ်ဝီလျံရှုံးနိမ့်ထားသည်။ သို့သော်ဝီလျံရဲ့မိခင်ခွင့်တစ်ခုခုနောက်ကွယ်မှပြုလေ၏။ ပုံပြင်သူမဝေးသောပြည်နှစ်ခုတောင်ကုန်းအကြားနေသော Vermillion အမည်ရှိလူငယ်တစ်ဦးကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်း, သူ့ကိုပြောပြလိမ့်မယ်။
Undertow ခရီးသွားလာနှင့်နေအိမ်များ၏အဓိပ္ပာယ်ဆောက်လုပ်သူတို့ရဲ့အတှေ့အကွုံမြားအကွောငျးရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများနှင့်မောလ်လူမျိုး၏ဇာတ်လမ်းများတစ်ဦးဖြစ်မည်စုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပုံပြင်များကလူယူကွဲပြားခြားနားသောခရီးကိုလိုက်နာလျက်, ” အမိမြေ ” ၏စိတ်ကူးနှင့်ပစ္စုပ္ပန်ဘဝအကြားဆက်လက်။ အဆိုပါစာအုပ်ပစ်လွှတ်ကြာသပတေးနေ့ 16 ဇွန်လ။
အံ့သြဖွယ်ဝတ္ထု၏ဤအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ stack အနိုင်ရလိုပါသလား? ဦးခေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook က post ကိုကူးပေါ်နှင့်မောလ်စာအုပ်သင်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပြီး, သငျသညျ Merlin ထုတ်ဝေသူများအနေဖြင့် Sette Giugno ဤလှပသော Sette Libri အနိုင်ရနိုင်သည့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ!
အဆိုပါဆောင်းပါးခေါင်းစဉ် “္တရ-Mergħat Tal-Impossibbli” ပြင်ပေးဖို့ updated ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
13 knjige Malteški Autori treba da čitate ovog leta
Ljeto je iza ugla i možemo konačno provesti vrijeme Lounging uz more s dugom piće i dobru knjigu. Ako ste u potrazi za nešto malo bliže kući nego Mordor, možda bi trebalo da ovih 13 nevjerovatan artikala po Malteški autori provjeriti.
Zahvaljujući našim prijateljima na Merlin Publishers imamo prekrasan hrpu7od ovih knjiga poklanja jednom sretni dobitnik, pa pročitajte na vidjeti kako to može biti vaš!
Kao jedan od samo dva malteški knjige ikada osvojio nagradu EU za književnost, to je imperativ za čitanje za ljubitelje savremene fantastike.
2. Što se događa u Briselu boravka u Briselu, Ġużè Stagno
Naslov bez obzira, ovo je klasična Stagno u malteški,aurnebesni i pronicljiv pogled na suštinski Malteški islander našao u glavnom gradu Europske unije. Ona također ima ono što je možda i najduži seks scene u malteški literaturi, na 5.000 riječi i brojanje.
Možda najbolji pisac svoje generacije, ovo je Azzopardi na nju najbolje. Kulħadd Halla ISHR warajh prati priču devet nezaboravnih ženskih likova.
Sqaq l-Infern je tehnički dječje knjige, ali naširoko čitati od strane odraslih,amožda i Malte prvi crossover knjiga, ova knjiga i njegova dva nastavka doveo fantazije u malteški književnosti, razbijajući sve lokalne rekorde prodaje u tom procesu.
Malte raunchiest i najpoznatiji Nanna – to samo za odrasle priča mora da se pročita. A smijati minut.
Steve Ebejer nije tvoja prosječno vrijeme putnik. Njegov je nekontrolisana moć, što znači da možete pronaći sebe isisan iz sadašnjeg i bačeni u drugo vrijeme i mjesto u bilo kojem trenutku. I svaki put kad mora spasiti svijet. Dakle, stežući nećete moći čekati da se ruke na njegov nastavak Jien Wieħed Minnhom
Pobjednik prvog izdanja Abbozz konkurs za svježe novi pisanje. Savršen za sve one koji su živjeli svoje djetinjstvo u osamdesetim.
Ova knjiga je izazvalo veliku gužvu kada objavljen, dijelom za svoje zemljište vrti oko fiktivnog zemljište za atentat premijera Dom Mintoff, dijelom za autora ozloglašenost sa eksplicitnim, prilično grafički scene seksa.
Definisanje knjiga svojih deset godina – Mejlak ovdje pokazuje kako Malteški književnost može se sječivo, kosmopolitski i zabavno.
Nedavno Osim kanon, Gramma prošle godine postao najbrže prodavani naslov fikcija – to je visoko nabijene tumačenje života sa anoreksijom. Gramma je inspirisan Leanne ličnom iskustava i ističe realnost bol oboljelih od poremećaja u ishrani.
Ovaj debi roman razbio rekord prodaje na noć knjige potpisuje. Priča fikcija je zapanjujuć akord sa mladim urbanim čitaocima, koji se identificiraju sa glavni lik u knjizi. Lusi je djevojka “, koji ništa nije znao”. Nije imala pojma kako se drže transparent na jedan protest životne sredine; ona nikada nije vidio golog muškarca; ona je imala niz nade datuma i zatim je upoznala George.
Sa U ime princa, Liam Gauci učvršćuje svoju ulogu kao Malta najdinamičnijih mladih istoričar, i predmet – Malteški gusari tokom godina Reda – odgovara zarazni entuzijazam njegovog pristupa. Poduprta istraživanja iz Notarial arhiv, Gauci poklona corsairing kao poslovni – ni više ni manje – to je u velikoj mjeri vodi šarene, kosmopolitski niz likova koji su u stvari samo kako bi zaraditi brzu zaradu.
Elizabet, na svom godišnjem ljetni odmor na Malti sa svojom porodicom, doživi srčani udar i pala na komu. Bez znakova oporavka na horizontu, njen mladi sin William je izgubljen. Ali William majka je ostavila nešto iza. Priče da će mu reći o mladić po imenu Vermillion, koji je živio između dva brda u dalekoj zemlji.
Undertow je zadivljujuće kolekciju narativa migranata i Maltežani o svom iskustvu putovanja, i izgradnju osjećaj doma. Priče prate različite putovanja ljudi uzimaju,akontinuitet između ideja “domovine” i sadašnjem životu. Knjiga lansiranja četvrtak 16. juna.
Sappiamo quello che gli errori sono stati ma ora a